The news of Padoh Mahn Sha killing was one one of the important milestones in my political life | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ကိုးကန့်- မြန်မာအစိုးရ အမြှီးခြင်းချိတ် သမိုင်း”
သမိုင်းတရားခံ သီတဂူဆရာတော်ကြီး »
The news of Padoh Mahn Sha killing was one one of the important milestones in my political life
The news of Padoh Mahn Sha killing was one one of the important milestones in my political life.
Actually with the National day, Shan National day and Valentine Days….
I started to write my articles in London based Burma Digest with “Dear Nan…letters: the first was my my Valentine present DVD for Nan” actually that wasapolitical article writing Shan State not to secede from union by writing as if I (asaBama man) pleading my estranged Shan not to seek divorce. With those series of letters, I effectively imitate the “Letters fromaFather to His Daughter”acollection of 30 letters written by Jawaharlal Nehru in 1928 to his daughter Indira Gandhi. Like him I revised or rewrote the history of Burma/Myanmar esp its Ethnic Minorities and religious minorities.
I wrote dozens of Shan articles. Even on that last issue I wrote and translate nearlyadozen Shan article. (Because the patron was the son of our first President Sao Shwe Theik, Chief Editor and few active writers were Shans and I had stayed in Kalaw, my NRD was ABN (Aung Ban)…and I have some loving Shan Friends…..
But as I put just put some Muslim articles, about less than 3-5%….Burma Digest Dr Tay Za was angry. ….And my article about Padoh Mahn Sha decorated with pictures and prayers in Christian, Buddhist and Muslim was edited of all the religious prayers and pictures and he rudely WARNED me not to bring in religion into politics i.e. into Burma Digest.
That is the turning point…I totally CUT ties with them. Stop giving free of charge services for them. I used my own money for all the interviews, translations (Eng to Bur and vice versa), typing in Burmese fonts (he just sent scanned hand written articles from around the world) …but I know he is getting funds for Burma Digest. He even wrote to three of us, Daw Khin Ma Ma Myo, another person and I to take ove as Editors…he wish to be just the owner (Chief Editor) but just wish to study Law…..
But I was disgusted the way they treat on Muslim issues. (To be fair they are quiet fair on Muslim issues but just ORDERED me NOT to write about Islam.)….Since then…I cut ties with them.
ချစ်သူများနေ့မှာ ထူးပြီး သတိတယ
သူ ဆိုတာ သဘောထား ပြတ်သားသူ
လို့ လူသိများတဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်း
အရုံး (KNU) အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း
Padoh Mahn Sha Lah Phan ကို
၅ ဇူလိုင် ၁၉၄၃ ခုနှစ် တောကျောင်း
ရွာ၊ မအူပင် ခရိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ
၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာတန်းကို
သမိုင်း အဓိက ဘာသာနဲ့ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ပဒိုမန်းရှာလားဖန်း ဆိုတာ အနောက်ပိုးကရင်
စကားအရ ကြယ်တွေ လတွေရဲ့ အလင်းရောင်
(Mr. Star Moon Bright) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါ
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ပဒိုကြီး လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်
ခံရတာ ဒီကနေ့ ချစ်သူများနေ့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဒိုမန်းရှာလားဖန်းကို မသမာသူ လူတစုက
လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရတာဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့၊ ဒီကနေ့မှာ (၇) နှစ်
ပဒို မန်းရှာကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်
မြို့ရှိ နေအိမ်အတွင်း ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ
၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲ လောက်မှာ သေနတ်
သမား နှစ်ဦးရဲ့ ဝင်ရောက် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်း
ကို ခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနီးကပ် ပစ်သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာကြောင့် ရင်အုံ
မှာသေနတ်ဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ ညာဘက်လက်မှာ
သေနတ် ဒဏ်ရာတချက်နှင့် နေရာမှာတင်ပွဲချင်း
ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပဒိုမန်းရှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သက်ဆိုင်ရာ KNU အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ဒီကနေ့
အထိ စုံစမ်းဖော်ထုတ် နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေမယ့်
သားဖြစ်သူ စောစေးစေး ကတော့ ထိုစဉ်က အုပ်
စိုး ခဲ့တဲ့ မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ခိုင်းစေမှုက
တဆင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ကရင် လက်နက်ကိုင် တပ်
ဖွဲ့တွေက ဝင်ရောက် လုပ်ကြံသွားတာဖြစ်မယ်လို့
သူ့ ယူဆချက်ကို ပြောပါတယ်။
NCUB အစည်းအဝေးက ပြန်လာပြီး အိမ်မှာ
နားနေရင်း ဝရံတာက ထိုင်ခုံတလုံးပေါ်မှာ ထိုင်
နေပြီး သစ်သီး လှီးစားနေစဉ် သေနတ်သမား
တွေက ဝင်ပစ်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူပြောချင်တာ DKBA ဗုဒ္ဓဘာသာ အဖွဲ့ကို
*(ဖထီးမန်းရှာကိုသတ်တာ ဗိုလ်စံပြုံး (ခ)
ဗိုလ်ဆံပြုတ်လို့ ပြောကြတယ်။ သူလဲ
သူများဝိုင်းပစ်တာ တစ်ဖွဲ့ လုံး သေဆုံးပါ
တယ်။ ဗိုလ်ချစ်သူဆိုတာက ဒီကေဘီအေ
က ၉၉၉ လားမသိ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ပါ
တယ်။ ကို Aung Kaung Myat မှ အမှန်
သူသေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၆၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး
စောစေးစေး၊ နမ့်ဘွားဘွားဖန်း၊ နမ့်ဇိုယာဖန်းနဲ့
စလုံ့ဖန်း တို့ သားသမီး လေးယောက် ကျန်ရစ်
ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ နန့်ကျင်ရွှေ ကတော့ သူ
မကွယ်လွန်ခင် တနှစ် အလိုမှာဘဲ လူကြီး ရော
ပဒိုမန်းရှာဟာ ရိုးသား၊ ကြိုးစားပြီး ကိုယ်ကြိုး
မဖက် ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေ
တွေ၊ တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ သူ့ကို
သိကြတဲ့ အလွှာအသီးသီးက ဒီကနေ့ အချိန်
အထိ တမ်းတ ပြောဆိုနေကြတုန်းပါပဲ ဆိုတာ
၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅။
‘( ပုံများမှာ ပဒိုကြီးနှင့် နောက်ဆုံးပုံမှာ
အင်္ဂလန်တွင် နေထိုင်သော သမီးဖြစ်
သူ နိုင်ငံရေး တက်ကြွသူ၊ စာရေးဆရာ
မ နမ့်ဇိုယာဖန်း (Zoya Phan) ဖြစ်ပါ
This entry was posted on February 15, 2015 at 4:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.